Hardik Oza's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Hardik Oza
5 SaaS Mutengi Kubudirira Kwakanakisa Maitiro
Chishanu, June 12, 2020 Chishanu, June 12, 2020 Hardik Oza
Kwakave nemazuva apo makwikwi ekubudirira kwevatengi achishanda nesimba risingaperi uye vatengi kubata. Nekuti ino ndiyo nguva yekukwira zvishoma uye kugamuchira zvakawanda maererano nekubudirira kwevatengi. Zvese zvaunoda mamwe marongero akangwara, uye pamwe rumwe rubatsiro kubva kune SaaS kunyorera kambani yekuvandudza. Asi, kunyangwe zvisati zvaitika, zvese zvinodzikira pakuziva maitiro akakodzera ekubudirira kwevatengi. Asi kutanga, une chokwadi here kuti unoziva iyo temu. Ngatitaurei
Kana zvinhu zvanyanya kushanduka, zvakanyanya kuramba zvakangofanana. Jean-Baptiste Alphonse Karr Chimwe chinhu chakanaka nezve pasocial media: haufanire kupfeka masiki. Unogona kuburitsa chero chinhu chero nguva kana nguva yese sezvazviri kuitika panguva idzi dze COVID-19 dzakarova. Iyo denda rakaunza dzimwe nzvimbo mukutarisa kwakapinza, dzakapinza mativi akapoteredzwa, dzakawedzera mabhanan'ana, uye, panguva imwechete, yakavhara mimwe mipata. Ivo vanoshanda savanachiremba, varapi vezvematongerwo enyika, uye avo